I-Redmi 7: Ukucaciswa, ixabiso kunye nokwaziswa okusemthethweni | I-Androidsis
Kwiveki ephelileyo iRedmi Qaphela 7 yasungulwa ngokusesikweni eSpain, eyayinomboniso osemthethweni nguXiaomi eSpain. Kuyo kuye kwavalwa ukuba uphawu luza kubonisa imodeli entsha kolu sapho kungekudala. Into eyenzekileyo ekugqibeleni ngenkcazo yeRedmi 7. Sijongene nemodeli entsha kuluhlu,
UXiaomi uveza ngokusemthethweni le Redmi 7, Imodeli entsha yenqanaba lokungena kwebrendi. Yimodeli eneenkcukacha ezidibana kakuhle ngokubanzi, kunye noyilo lwangoku kunye nexabiso elikhulu lemali. Ke inokuthengisa kakuhle kakhulu kweli candelo lentengiso.
Ngokuphathelele kuyilo, Sifumana uyilo olunemfashini kakhulu namhlanje kule Redmi 7. Uphawu lwaseTshayina lukhethe iscreen ngenotshi ngohlobo lwethontsi lamanzi, esibona kakhulu ezivenkileni namhlanje. Ukongeza, ikwazibophelele nakwikhamera ephindwe kabini kuyo.
1 Ukucaciswa kweRedmi 7
Ukucaciswa kweRedmi 7
Olunye ulwazi kule modeli luye lwavuza kwezi veki. Nangona kugqityiwe ngokusesikweni, sinokubona okwakuyinyani koku kuvuza kwezi veki. Imodeli yenqanaba lokungena, kunye namandla aphakathi kunye nokubalulwa ngokubanzi okwamkelekileyo. Oku kukucaciswa kweXiaomi's Redmi 7:
IsikriniI-6,26-intshi ye-LCD ene-HD + isisombululo se-1520 x 720 pixels kunye ne-19: 9 ratio
Inkqubo: I-Snapdragon 632
i-ram: I-2/3/4 GB
Ukugcina: 16/32/64 GB (Iyandiswa nge-MicroSD)
Cámara trasera: 12 + 2 MP ngeFlash ye-LED
Conectividad4G / LTE, Dual SIM, iBluetooth 5, WiFi 802.11 Dual, irediyo ye-FM, i-microUSB
Ubungakanani: X x 158.7 76.4 8.9 mm
Inkqubo yokusebenzaI-Android 9.0 Pie ene-MIUI 10
Kukuhlaziywa kolu luhlu lweshishini laseTshayina, ezazisele zilindelwe ngabaninzi. Sifumana uyilo oluhlaziyiweyo, kulandela imeko yentengiso yokubheja kwinotshi encitshisiweyo emile okwethontsi lamanzi, esiwabona kwii-smartphones ezininzi, ezinje Inqaku leRedmi yeNqaku le-7 ityhilwe ngoJanuwari.
I-brand ijoyina ukusetyenziswa kwezikrini, kubandakanya olu luhlu, apho bathe khona baceba ukusebenzisa izikrini ezincinci kwixa elizayo. Kwiprosesa yale Redmi 7, uphawu lwaseTshayina olukhethileyo umntu omdala endimaziyo kwimarike enje ngeSpapdragon 632, kanye yeyona nto ibaluleke kakhulu kuluhlu oluphakathi, okwangoku ithotyelwe ngakumbi kwintengiso. Ukongeza, sifumana indibaniselwano eyahlukeneyo ye-RAM kunye nokugcinwa kwifowuni. Ke kukho ukhetho.
Ukuphumla, siyabona ukuba ifowuni ikwasebenzisa ikhamera ngasemva kabini. Kule meko indibaniselwano ye-12 + 2 MP, evumela abasebenzisi ukuba bathathe iifoto ezintle. Ngelixa umphambili usebenzise ikhamera ye-8 MP. Iikhamera ezisefowunini ziqinisekisiwe ukuba zinikwe amandla obukrelekrele bokufakelwa. Ibhetri yenye yamandla ale Redmi 7, enomthamo we-4.000 mAh, ethi ngokungathandabuzekiyo isinike intsebenzo elungileyo ngawo onke amaxesha.
Njengesiqhelo kwezi meko, ifowuni sele ihanjisiwe ngokusemthethweni e-China. Nangona okwangoku asazi nto malunga nokuqaliswa kwayo kwamanye amazwe. Into eqhelekileyo kukuba olu luhlu lukwasungulwa eSpain. Ke ngoko, sinokuba neendaba kungekudala ngayo. Siya kunika ingqalelo kule nkalo.
Into esele siyazi ngamaxabiso eenguqulelo ezahlukeneyo zale Redmi 7 Uhlobo lwesiTshayina. Kuba amaxabiso abo e-China asemthethweni, okusinika umbono wokuba silindele ntoni. Njengoko bekulindelwe, ngamaxabiso asezantsi. La ngamaxabiso abo:
Inguqulelo ene-2GB / 16GB inexabiso nge-699 yuan okanye i-euro ezingama-92 kutshintshiselwano
Imodeli ene-3GB / 32GB ixabisa i-799 yuan (malunga ne-105 euro ukuyitshintsha)
Inguqulelo ene-4GB / 64GB ibiza i-999 yuan, emalunga ne-131 euro ukuyitshintsha
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » I-Redmi 7: Uluhlu olutsha lokungena lukaXiaomi lusemthethweni